राजधानीका प्रत्यक घरधनीले पाउने भए प्रतिदिन ७५० लिटर मेलम्चीको पानी….. – SUDUR MEDIA
March 23, 2021 AdminLeaveaComment on राजधानीका प्रत्यक घरधनीले पाउने भए प्रतिदिन ७५० लिटर मेलम्चीको पानी…..
मेलम्चीको पानी उपत्यका भित्रिसकेको छ तर त्यसलाई वितरण भने गर्न बाकी रहेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले राजधानीवासीले दिनहुँ प्रतिव्यक्ति ७५ लिटर मेलम्चीको पानी उपयोग गर्न सक्ने जनाएको छ ।
हाल प्रत्येक घरमा करिब १० जना बस्ने र तिनीहरुले ७५ लिटरसम्म पानी प्रयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस हिसाबले प्रतिघर ७५० लिटर दैनिक मेलम्चीको पानी पाउने छन । यसअघि एक घरमा लगभग ४ जना बस्ने गरी अनुमान गरिएको हो ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार उपत्यकाको जनसंख्या करिब २९ लाख छ । अहिले यो संख्या ४० लाखभन्दा बढी पुगिसकेको अनुमान गरिएको छ । प्रत्यक दिन दुई घण्टा पानी वितरण गरिने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख त्रिरेशप्रसाद खत्रीले बताए । मेलम्चीको पानी लाइनबाट सिधै ७ मिटर अर्थात अढाई तले घर माथि सम्म वितरण गर्न सकिने उनले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा दीपेन्द्र विष्टले लेखेका छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः चार्जमा लगाएर फिल्म हेर्ने क्रममा मोबाइल प’ड्किँदा किशोरीको मृ’त्यु ! चार्जमा लगाएर फिल्म हेर्ने क्रममा मोबाइल पड्किँदा अछाममा एक किशोरीको मृ’त्यु भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहका अनुसार जिल्लाको मङ्गलसेन नगरपालिका–१ की १५ वर्षीया सपना नाथको मोबाइल पड्किएर मृ’त्यु भएको हो ।
मृ’तक नाथ स्थानीय कुन्ति माध्यमिक विद्यालय कक्षा ६ मा अध्यनरत थिइन् । मोबाइल प’ड्किँदा ग’म्भीर घा’इते भएकी नाथको जिल्ला अस्पताल अछाममा उपचारका क्रममा आज मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल असार १८ गते शुक्रबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ जुलाई ०२ तारिख
हिंडेर अस्पताल गएकी २१ वर्षीय नेहा तुलाधर श’व बाहनमा फर्किइन् ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…..